» महरालाई कारबाही गरेर जनविश्वास आर्जन गर्न नेता सिंहको सरकारलाई सुझाव
महरालाई कारबाही गरेर जनविश्वास आर्जन गर्न नेता सिंहको सरकारलाई सुझाव
१५ आश्विन २०७६, बुधबार १२:५०
१५ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कृष्णबहादुर महरालाई कारबाही गरेर जनविश्वास आर्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेता सिंहले भने, ‘सभामुखको व्यक्तित्व प्रस्तुत गर्न उहाँ चुकिसक्नु भएको छ । नेकपाको नेता भएपछि जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने ? महिलालाई दुर्व्यवहार गर्ने ? ढाकछोप गरेर कानुनभन्दा माथि नेकपाका नेता-कार्यकर्ता हुने ? यो हुनै सक्दैन ।’
एक महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि नेकपा नेता महराले सभामुख पदबाट मंगलबार राजीनामा दिएका थिए । तर महराको राजीनामा ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गरु भनेजसरी आएको सिंहले टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानको कुनचाहिँ धाराअनुसार राजीनामा गर्नुभयो रु जनतालाई भ्रममा पार्न त भएन नि ।’